Imimoya yobutyebi i-Amulet yokutsala imali kunye nobutyebi-Ihlabathi leeAmulets
Ikhaya > Imimoya yobutyebi iAmulet yokutsala imali kunye nobutyebi
Imimoya yobutyebi iAmulet yokutsala imali kunye nobutyebi
Xabiso rhoqo € 19 Intengo yentengiso € 54 Ixabiso lento /nganye
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo- € 19 ISterling Silver ayisebenzi- € 29 Yenziwe ngentsimbi engenanto - € 42 ISterling Silver yenziwe yasebenza- € 54
Imimoya yoSomali yokuTyebisa ekutsaleni imali kunye nobutyebi
Imimoya yeMali kunye Nobutyebi, ubutyebi kunye nobuncwane buquka iBune, iiFasi, iShax kunye neSeere. Zonke ezi-4 yimimoya egqibeleleyo yokutsala imali, ubutyebi, intabalala, ubutyebi nodumo.
I-Bune, i-Foras, i-Shax kunye ne-Seere baziwa kakhulu ngokuzisa ubutyebi kunye nethamsanqa. I-Spellcaster White Sortiarius yethu idibanise ngokugqibeleleyo imimoya emi-4 eya kukunceda kwezi zinto zobomi bakho. Apha uza kubona iinkcukacha zento nganye.
I-Bune inceda ukufumana ubutyebi kunye nokubonelela ngeengcali kunye nobulumko behlabathi. Ukwazisa ngokuthetha kunye nekhono lamagama. I-Bune ine-shoulder length ubude bezinwele ezimnyama ezinamehlo amnyama ahlanjulweyo, i-tan kunye namaphiko amnyama.
U-Seere (ezantsi) ufumana ubuqhenqa, uthumele iimpahla, kwaye angakwazi ukulawula ixesha Angenza ukuba isipela okanye isenzo somlingo senzeke ngokukhawuleza. Unako ukuzisa izinto ezininzi ukuba zenzeke ngokukhawuleza. Uhlobo oluhle kwaye luncedo kumninimzi.
I-Seere inamaphiko amhlophe kunye neetan. Ungowokuphakama obude kunye nokwakha okunamandla. Unobumnandi obude obude obude obude kunye nobubuso obomeleleyo. I-Seere iyakhathazeka kakhulu kwi-flight kwaye ithetha kakhulu.
I-Shax (ekhohlo) inokubangela ukuba umntu abe sisithulu, isimumu okanye imfama kwaye angakususa ukuqonda. Angathatha imali okanye izinto anazo kwaye kutyhila indlela yepropathi ebiweyo okanye efihliweyo izinto. Unika abantu abaqhelekileyo kwaye baya kuthutha nantoni na.
I-shax inezinwele ezimfutshane eziluhlaza kunye nekhusi eliphakathi kunye nokomnyama. Unika omnye umva wegunya ovela kwi-aura yakhe. Unamandla kakhulu kumagick wakhe.
Iiforamu (embindini) zinokwenza umntu abe nesisa, abe sisilumko, abe sisityebi, kwaye angoyiseki. Ubuyisa ipropathi elahlekileyo kwaye ufundisa iingcinga kunye nokuziphatha. Utyhila amandla emifuno kwaye amatye anqabileyo kwaye unamandla okwenza ukuba omnye angabonakali, abe nobomi obude, kwaye abe ne charisma.
Le Amulet ifumaneka ngesinyithi (35mm) nakwisilivere ebunjiweyo (40mm)